Inona no voninkazo nambolena tamin'ny voa tamin'ny lohataona?
Maro no mihevitra fa ny karazam-bolo amin'ny zaridaina sy ny zaridaina manontolo dia tokony hijinja sy hialokaloka maharitra mandritra ny ririnina. Mandritra izany, fararano - fotoana handinihana ireo fandriana sy fandriana amin'ny taona manaraka ary hametraka fototra "mafy" ho azy ireo amin'ny endrika fanomanana ny tany ary, raha ilaina, podzimnego mamafy zavamaniry.
Amin'ity lahatsoratra ity, hiresaka momba ny fambolena voninkazo isika amin'ny fararano (ambioka).
Mamafy voninkazo ny voninkazo
Ny famafazana voninkazo amin'ny fararano dia hamela anao hampitombo ny voninkazo amin'ny herintaona, mandritra ny herinandro vitsivitsy, na hatramin'ny iray volana. Indrindra raha raha amin'ny lohataona ianao dia manafina ny famafazana miaraka amin'ny foibe manomboka amin'ny fararano amin'ny fararano. Voalohany indrindra, manondro voninkazo sy legioma isan-taona izany .
Ary ny zavamaniry sasany dia mitombo tsara kokoa (be famindram-po) aorian'ny fisian'ny lavalava lava, izay mitranga amin'ny trangam-bokatra famafazana voninkazo.
Zava-dehibe ny hiheverana fa amin'ny fotoan'ny fanindronana dia mitombo ny voan'ny tsimokaretina, noho izany dia tokony hihoatra lavitra noho ny rehefa nafafy tany amin'ny lohataona mafana ny fihinanana voa. Tsy ilaina ny fandroana rano - ampy ho an'ny fanjavonan'ny voninkazo ny fahantrana amin'ny lanezy mandomando.
Tsy ilaina ny manisy tombo-kase ny voany - tsy miaro ny hafanana izany, fa amin'ny lohataona, ny tany, izay mihetsiketsika amin'ny ririnina, dia manamboatra sora-baventy maranitra, izay tsy hipoitra fotsiny ny tifitra.
Fomban'ny fambolena ambioka amin'ny fararano
Fantaro ny fotoan'ny famafazana ny voninkazo iray sy ny isan-jatony amin'ny fahalavoana dia tsy mora noho ny tsy fitoviana sy ny tsy ampoizina ny toetrandro. Ankoatra izany, tokony hohadinoinao ny toetran'ny rivotra iainanao.
Amin'ny ankapobeny, ny famafazana dia azo atao aorianan'ny fananganana toetr'andro mangatsiaka mafana - mba tsy ahafahan'ny voa maniry avy amin'ny hafanana sy ny fahamendrehana.
Ho an'ny tarika afovoany, ny fotoana tsara dia heverina ho ny tapaky ny Novambra. Any amin'ny faritra avaratra, voangy ny voninkazo 1-2 herinandro teo aloha, ary any amin'ny faritra atsimo - herinandro vitsivitsy taty aoriana.
Na izany aza, raha tsy nahavita namafy ianao tamin'ity vanim-potoana ity - aza manahy, azonao atao izany avy eo, ny zavatra manan-danja indrindra dia ny manana fotoana mialohan'ny fotoana izay mandrakotra ny rakotra ranomandry. Amin'ny tranga faratampony, azo atao ny mamafy voninkazo sy legioma, na dia amin'ny Janoary, mivantana amin'ny angona mangatsiatsiaka. Mazava ho azy, amin'ity tranga ity dia maniry ny hanomanana ny fandriana (mipetaka sy voamarika) mialoha, satria sarotra be ny manangana sakana amin'ny tany mangatsiatsiaka. Ny tena zava-dehibe amin'ny fotoana iray dia ny manarona ny fandriana amin'ny tany na ny fonosana (ampiasaina ny fifangaroana voaangona amin'ny fararano na mividy karazan-tany maro ao amin'ny magazay). Ankoatr'izany, ny fandriana dia azo zakaina amin'ny fantson-kitay na hodi-kazo vita amin'ny hazo mba tsy hamonoana ny voa ao anaty ranomandry (na dia tsy ilaina aza izany).
Annuals for seeds in autumn:
zazakely ny fofonainy,
C + + C C C C C C C C C C C C
ny andian'ondry Drummond;
Firaisana maharitra mandritra ny ririnina:
cyclamen (karazana ririnina).
Zaridaina amin'ny fomba frantsay - varavarankely ho an'i Paris!
Caterpillars eo amin'ny paoma - ahoana no hiadiana?
Ahoana no fomba hitomboan'ny mipongy any amin'ny firenena?
Compost ho an'ny mouhignons
Iza amin'ireo mpamaky no tsara kokoa?
Nahoana no manonofy ny lava?
Ahoana no hananana cucumbers - tsiambaratelon'ny fambolena sy fiompiana
Kate Middleton dia mandany ny volan'ny mpandoa hetra amin'ny filany manokana
Ny labiera tsy ara-boajanahary - loza na tombotsoa?
Liona avy amin'ny voan-kafe
Ahoana no hambolena zana-kazo eny amin'ny lohataona?